Saturday Tea Time And Sunday Lunch In Kemaman..
မိထ္ထီလာအ ရေးအခင်းဟာဆိုရင် ၉၆၉ နဲ့ ပတ်သက်နေတယ်
Bao Sheng's durian timetable for 2013
It is quiteadangerous and dirty plot by government’s agent provocateurs showing the killings to reignite the revenge killings
Clare’s underground Free radio ‘being jammed’
BN Ciplak Manifesto Pakatan Dengan Ketara, Petanda Pakatan Bakal Pemerintah Negara
သန်လျှင်တွင်လည်း ၉၆၉ ဂိုဏ်းသောင်းကျန်း
လှည့်ကွက်ထဲ မျောနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူ
ဘာသာညီအစ်ကိုများ (ရေးသူ- မန္တလေးဘုန်းကြီး )
မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှုသည် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုသူများအတွက် ခေါင်းခဲစရာဖြစ်လာ
မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်ခံရသည့် ဒုက္ခသည်များ နေအိမ်များမှ ပစ္စည်းများ ယခုထိ လုယက်ခံနေရ
မြန်မာနိုင်ငံမှ အကြမ်းဖက်မှုများ အတွက် Asian Muslim Action Network မှကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်
Life of Rohingya, may be someone had advised ASEAN to push Rohingyas back into Indian Ocean
မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ
The NYT carried an interesting article about howaRat Chase Backfires At Reactor In Japan. Hiroko Tabuchi wrote:
Workers at the stricken Fukushima nuclear power plant who were installing wire nets Friday to keep rats away fromavital cooling system instead tripped that system, causing it to fail for the second time in weeks.
The spent-fuel pool at the site's No.3reactor went without fresh cooling water for almost three hours on Friday afternoon, said the plant's operator, the Tokyo Electric Power Company, or Tepco.
The debris-strewn plant still relies on makeshift cooling systems, some of which were hastily put together in the accident's frantic aftermath. The spent-fuel pools, which hold far more radioactive material than the reactor cores, have beenaparticular source of concern. More HERE.
Over here, Tyler Durden commented:
Cooling was restored by late evening on Friday, and there was no imminent danger to the 566 nuclear fuel rods stored in the pool, according to the company. It would have taken at least two weeks for the pool to have risen above the safe level of 149 degrees Fahrenheit, Tepco said." Of course, TEPCO would certainly tell the truth to all those it lied to for weeks in March 2011, the same TEPCO wherearat is the weakest link in its meltdown avoidance planning.
This time however, TEPCO, credibility and professionalism once again in tatters, was forced to revealalittle more, namely that "radioactive water may have leaked into the ground fromastorage tank at Japan's crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in the latest ofaseries of troubles at the facility."
Blame the rats again? And don't worry, it was just "this much" caesium leaking into the ocean, so who's really counting. Sadly, it will be years before the irradiated fauna - both fish and humans - hasasense, over the daily lies, of just how vast the damage has been. By then, however, Japan will have enough hyperinflation to keep it sufficiently distracted from the third arm growing on the back.
Posted: 07 Apr 2013 10:36 AM PDT
PRU13 akan berlangsung tak lama lagi. Berikut dikongsikan tentang apakah hukum kita undi Calon Bukan Islam dalam Pilihanraya nanti? Banyak kekeliruan telah timbul, ada sebahagian pandangan yang meletakkan Haram! Begitu sekali beratnnya dihukumkan. Jadi, dengan jawapan Ust Dr Zaharuddin Abdul Rahman di atas diharap semua jelas.
Posted: 07 Apr 2013 08:37 AM PDT
Two American researchers whose efforts to deliberately re-engineer the H5N1 avian flu virus to be more virulent and deadly to humans are now asking thatagovernment-advised moratorium on their controversial research be lifted. According to TIME, the duo alleges that precise details about how it developed the deadly flu strain must be made public, and that its controversial research be allowed to continue for the sake of "public health."
Latest @ bird flu in China: HERE
Call for stricter test: HERE.
Poultry culled. Read it here.
Two killed. Read it HERE.
Pandora's box opened HERE.
Posted: 07 Apr 2013 07:40 AM PDT
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ မိထ္ထီလာအရေးအခင်းဟာဆိုရင် လူတွေ ပြောနေဆိုနေကြတဲ့
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု နဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်
မိတယ် တကယ်ပဲ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသလားဆိုတဲ့ အဖြေကိုတော့ ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအ
ထောက်အထားကျွန်တော့် မှာမရှိတဲ့ အတွက် ဒီအရေးအခင်းကြီးဟာ ၉၆၉ ရဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ကျွန်
တော် မပြောလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် သွယ်ဝိုက်သောနည်းလမ်းနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကတော့
အသေအခြာပြောနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် လည်းကျွန်တော် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု ကို မထောက်ခံခဲ့တာ
ပါ ဟုတ်ပြီ ဘယ်လိုသွယ်ဝိုက်သောနည်းလမ်းဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောပါမယ် ။
စလိုက်တာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ အရေးအခင်းအပြီးမှာ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ်ခေါ် ဘင်္ဂလီ
ခေါ် ခေါ် ဒီလူမျိုးအစ္စလမ် ဘာသာဝင်တွေ အပေါ်ပြည်တွင်းနေ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ က နေအဲ
ဒီလူမျိုးတွေ ဘက်ကနေပြီး lobby လုပ်ခဲ့ တာကြောင့် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး
ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ ကို တိုက်ခိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် ကစခဲ့ တာပါပဲ ။
ဟုတ်ပြီ ..ဒါဆိုဒီမှာမေးစရာမေးခွန်းကဒီပြည်တွင်းနေ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ
ဘာကြောင့် ဝင်ပြီး lobby လုပ်သလဲ ဆိုတာထက် ဒီပြသနာကို ဘယ်လိုအေးချမ်းအောင်လုပ်
မလဲ ဘယ်လိုရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ပိုအခြေခံကျမယ်ထင်ပါတယ်
ပြသနာ မဖြစ်ပဲ အေးချမ်းနေရင် ဒီ lobby ကိစ္စက ပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး lobby ကိစ္စ
က ဒုတိယကိစ္စ ပါ ပထမကိစ္စ က ဒီပြသနာကိုရေရှည်မှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အေးချမ်းအောင်
ဆောင်ရွက်မလဲ ဘယ်လိုနည်ကပြေလည်စေမှာလည်း ဒါကပိုပြီးအခြေခံကျတဲ့ vision တစ်ခုပါ
ဒါကိုပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းပဲ ဒုတိယကိစ္စကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်သလို ဖြေ
ရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ပြသနာကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအခြင်းခြင်း
အမုန်းတရားအာဃာတတရားတွေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးယုံကြည်မှု မရှိတော့ တဲ့ အခြေအနေဆိုက်
ရောက်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် လက်မှန်းမှီသလောက်လေ့ လာကြည့်တော့ ဒီပြသနာကို ဘယ်လိုပြေလည်အောင်ဖြေ
ရှင်းမလဲ ဆိုတဲ့ suggestion တစ်ခုမှ မတွေ့ ရပဲတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့ နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်
စွတ်စွဲ ပြစ်တင်ပုတ်ခတ်နေတာပဲ အတွေ့ ရများနေတယ် အညှီရှိလို့ ယင်အုံတဲ့ ကိစ္စ မှာ ယင်ကို
ချောက်ထုတ်နေရုံနဲ့ ပြီးမလား အညှီမရှိအောင်လုပ်ကြရမာမဟုတ်ဘူးလား အခုတော့ အညှီကို
ဒီအတိုင်းထားပြီး ယင်ကိုခြောက်နေကြတာနဲ့ တူနေပါတယ် အညှီကို မဖျောက်နိုင်ဘူးထားဦး
ယင်မလာအောင်လုပ်တဲ့ နည်းလည်းရှိပါတယ်ဒါက ဒုတိယစဉ်းစားရမယ့် နည်းလမ်းပါ ဆရာ
တော် အရှင်ညာဏိသရပြောသလို ခဲနောက်လိုက်တဲ့ ခွေးတွေ လုပ်မလား ပစ်တဲ့ လူနောက်လိုက်
တဲ့ ကျားပဲ လုပ်မလား စဉ်းစားကြပေါ့ ဗျာ ။နောက် ၉၆၉ ရဲ့ main theme ဖြစ်တဲ့ အစ္စလမ်
ဘာသာဝင်တွေ နဲ့ စီးပွားရေး အဆင်အဆံမလုပ်ကြနဲ့ ဆိုတဲ့ အချက် ဒီအချက်ကိုဆွေးနွေးပါမယ်
၉၆၉ ရဲ့ အပြောအရ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့ ဘာသာဝင်ဆိုင်တွေ မှာပဲ အားပေး
ဝယ်ယူကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အချင်းချင်းပဲ
အားပေးဝယ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ပါ ကျွန်တော်လေ့ လာမိသလောက် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ
ဟာ သူတို့ ဘုရားရဲ့ မိန့် ဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ ဟာလာလုပ်ပြီးသား အသာကိုပဲ စားရမယ်ဆိုတဲ့ အတွက်
ကြောင့် အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ဘာသာဝင်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာသာဝယ်ယူ
ကြတာဖြစ်ပြီး အခြားသောရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု တွေ အကုန်လုံး သူတို့ ဘာသာဝင်တွေ
နဲ့ ပဲ လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ဒီဘာသာဝင်တွေ အချင်းချင်းပဲ
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေလို့ သူတို့ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ပါ့ မလား စဉ်းစားကြည့် ဖို့ ပါ
နောက်ပြီး ဒီလိုစည်းပွားရေးအရ အထီးကျန်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ ယခုကျင့် သုံးမယ့်
ဒီမိုကရေစီ ဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ လျှော်ကန်သင့်မြတ်ပါ့ မလား နောက် တစ်ချက်က ယခုလို
လုပ်ပြီး ဒီလို လူနည်းစုအပေါ် ကိုနိုင်လိုမင်းထက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အခြားသော တိုင်းရင်းသား
လူနည်းစုတွေ ကဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေအပေါ် မှာယုံကြည်မှု ရှိနိုင်ပါဦးမလား တိုင်းရင်း
သားအများစုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာထည့် သွင်းမစဉ်းစားတာလားဒီလိုလုပ်ခြင်း
ဟာ လူမျိုးကြီးဝါဒ ထူထောင်နေခြင်းဆိုတဲ့ အမြင်ကို ထပ်ပြီးအားဖြည့် ရာရောက်မသွားနိုင်
ဘူးလား ဟာ.. အစ္စလမ်ပြီးရင်တော့ ငါတို့ ခရစ်ယန်အလှည့် ပဲ ဟလို့ မစဉ်းစားလာနိုင်ဘူး
လား ဒါဆို ယခုတည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာ တည်ထောင်
အောင်မြင်နိုင်ပါဦးမလား စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် မို့ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုလက်မခံ
မထောက်ခံ တာပါ ကိုယ့် အမျိုး ကိုယ့် ဘာသာကိုယ့် သာသနာကို ပြန့် ပွားစေချင်ရင် မိမိဘာ
သာ သာသနာကို လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးပြီးသာသနာပြု လို့ ရပါတယ် တောင်တန်းဆရာတော်
ဘုရားကြီး ဆရာတော် အရှင်ညာဏိသရတို့ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သာသနာပြုချင်းကိစ္စ
တွေ မှာ ဘယ်ဘာသာ သာသနာကိုရှုတ်ချပြစ်တင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြု ခဲ့ လည်းသေ
ခြာစွာစဉ်းစားကြည့် နိုင်ပါတယ် နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ လွတ်လပ်စွာဆို
တဲ့ စကားရပ်ပါ မိမိက မိမိဘာသာ သာသနာကို လွတ်လပ်စွာပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်ခွင့် ရှိသလို
အခြားသော ဘာသာ သာသနာတွေ ကလည်းလွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်ခွင့် ရှိရပါမယ်
ဈေးရောင်းသလို ပြောရ ရင် ပင်လယ်ရေခပ်မကုန်ပါဘူး လူတိုင်း လူတိုင်း ခပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါ
တယ် မိမိ ဘယ်လမ်းကိုလျှောက်နေသလဲ မိမိနိုင်ငံ ဘယ်လမ်းကိုသွားနေသလဲ ဆိုတာမျက်
This is the latest durian timetable for 2013, as released by my friend, Durian Seng, of the Bao Sheng Durian Plantation in Sungai Pinang, Penang. I haven't attempted to clean up any of the text yet because the information speaks for itself:
New Durian time table - 2013年。新榴莲时间表 June July August
D604 1 - 23 June / 15 July -5August 2013 黄肉乾包。黏喉。香滑顺喉 rating 3+ 最低消费 RM10 起跳。顶级RM35/公斤
Lipan 蜈蚣3- 23 June / 17 July - 15 August 2013 米色。肉黏喉代苦。纯粹芳香。香滑顺喉 rating 4+ 最低消费 RM25 起跳。顶级RM55/公斤
Kunpoh angbak 坤宝红肉3June -3July / 15 July - 12 August 2013肉红。黏喉代苦。四十年树龄以上会代黑色。rating 4最低消费 RM20起跳。顶级RM45/公斤
Little red 小红5- 28 June / 15 July - 8 August 2013 肉红。香甜顺滑。rating 3+最低费 RM15 起跳。顶级RM25/公斤
D600 10 June -2July / 15 July -5August 2013 金黄色。味苦。rating 3+最低消费 RM15 起跳。顶级RM25/公斤
Kapri 甲必利 15 June -5July 2013 百色肉。味苦。纯粹芳香。四十年树龄以上会代黑色。rating 4+ 最低消费 RM20 起跳。顶级RM35/公斤
D11 十一号 15 June -5July / 20 July - 15 August 2013 肉米色。味香甜。黏喉。rating4最低消费 RM20 起跳。顶级RM35/公斤
Horlor 葫芦 18 June - 8 July / 1 - 20 August 2013 色金黄。黏喉。纯粹芳香。rating5最低消费 RM25 起跳 。顶级RM60/公斤
Red prawn 红虾 。季节 20 June - 8 July /5- 20 August 2013。色粉红。 味觉甜中代苦。纯粹芳香。肉嫩黏喉。顺滑可囗。果肉浓厚无纤维。四十年树龄以上会代黑色。而刚掉落会让舌尖有麻痹的感觉。挑战味蕾。叫馋舌为之颤愕。 Rating5Star 最低消费 RM30 起跳。顶级RM70/公斤
Green skin 青皮D15 18 June - 8 July 2013 色米黄。味甜代苦。肉嫩顺滑可囗。四十年树龄以上会代黑色。rating 4+ 最低消费 RM20 起跳。顶级RM45/公斤
D99 20 June - 10 July 2013 金黄色。甜中代苦。纯粹芳香。肉嫩黏喉。果肉浓厚 rating 3+ 最低消费 RM15 起跳。顶级RM35/公斤
D15 25 June - 15 July 2013 金黄色。甜中代苦。黏喉。果肉浓厚 rating 3-最低消费 RM15 起跳。顶级RM25/公斤
Kunjit 黄姜 20 June -5July / 20 July -5August 2013 深黄色。甜中代苦。黏喉。rating4最低消费 RM30 起跳。顶级RM55/公斤
Bak eu 白肉油 22 June -5July 2013 白色肉。甜中代苦。黏喉。纯粹芳香。果肉浓厚。rating 4+ 最低消费 RM20 起跳。顶级RM35/公斤
Ganjau 长帝 25 June - 15 July 2013 黄肉。甜中代苦。黏喉。果肉浓厚。rating4最低消费 RM15
Posted: 07 Apr 2013 06:34 AM PDT
Posted: 07 Apr 2013 06:31 AM PDT
Have you seen the video clips of Meikthila killings on FB?
I think the government's agent provocateurs are showing the killing of both sides so that Muslims would like to revenge and the majority would react like Rohingya reaction to Taunggope 10 massacre was used to do Massive Genocide on Rohingyas in whole Rakhine….
I think this is quiteadangerous and dirty plot.
Posted: 07 Apr 2013 06:07 AM PDT
from Malaysiakini by Nigel Aw 2:22PM Apr 7, 2013
Radio Free Sarawak and Radio Free Malaysia have been jammed and their web sites made inaccessible after coming under heavy cyberattacks in the past few days. Clare Rewcastle-Brown, founder of the two stations, said: "There have been attempts at broadcast interference on both radio stations by jamming from different parts of the world over the past few days. These have had limited success so far and we have been working on tracing the perpetrators."
The two stations broadcast from London on short-wave frequencies. Coordinated cyberattacks on their respective web sites were recorded all yesterday; they "came from all over, it appears, but mainly from the US and Malaysia, and our servers had to close down", Rewcastle-Brown said. The Sarawak Report web site, the first launched by Rewcastle-Brown, similarly came under attack but was holding out.
"I think that all such attacks only show the weaknesses of the people behind them, who are evidently so dishonest and fearful that they resort to these underhand tactics against even the slightest attempt atafree broadcast media. The BN is throwing in very large sums of money to suppress our voice, but all the BN is doing is demonstrating to the world that its pretence of holdingademocratic, free and fair election isasham," Rewcastle-Brown said. "If these two radio stations are doing nothing else, they are showing Malaysia's BN coalition for what it really is to the rest of the world."
Podcasts of Radio Free Sarawak and Radio Free Malaysia programmes are, however, still available at Soundcloud, the online audio database.
Go to these links below to listen. Please spread this around.
» Radio Free Sarawak podcasts
» Radio Free Malaysia podcasts
Posted: 07 Apr 2013 08:40 AM PDT
" Sementara itu, naib presiden PKR Nurul Izzah Anwar dalam satu sidang media berasingan hari ini berkata, beliau melihat bahawa manifesto yang diumumkan tidak disalin bulat-bulat daripada tawaran Pakatan tetapi cuba mengetengahkan tawaran "populis, tanpa perubahan fundamental".
"Ini adalah plagiarisme dalam definisinya yang jelas. Manifesto itu populis, tetapi tercicir perkara yang lebih utama, iaitu reformasi fundamental," katanya dalam ucapan selepas acara pemeriksaan kesihatan di kawasan Lembah Pantai hari ini.
Posted: 07 Apr 2013 04:34 AM PDT
07 April 2013သန်လျှင်၊ ဧပြီ ၆သတင်း – ပသီမ (MMM)
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးသင်ခန်းစာသင် ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူဦးအေးဝင်းနေအိမ်ရှေ့သိုိ့ ၉၆၉ တံဆိပ်ကပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲသမား (၈)ဦးက မတ်လ (၂၆)ရက်နေ့တွင်ည၁၀နာရီခွဲမှ နံနက် ၂နာရီခန့်ထိလာရောက်ဆူပူသောင်းကျန်းခဲ့ကြောင်း နှင့် အဆိုပါဆူပူမှုအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း တစုံတရာ အရေးယူဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။
"ပွကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲသားတစ်ဖွဲ့က အိမ်ရှေ့မှာ လာရောက်သောင်းကျန်းတယ်။ မဖွယ်မရာတွေလည်းလုပ်တယ်။ ရိုင်းဆိုင်းတဲ့ ဆဲဆိုမှုတွေလုပ်ပြီး ဘာသာရေးကိုထိခိုက်ပြီးတော့ စော်ကား တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ရှိတဲ့ရုံးကို အကြောင်းကြားတော့ ဘာမှအရေးယူခြင်းမရှိပါဘူး။ နောက်ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကလည်း မရှိဘူး။ ဒီအစွန်းရောက်သမားတွေ့ရဲ့ လက်ခုပ်ထဲက ရေဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘာသာရေးပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွေ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်"ဟု ဦးအေးဝင်းက မြန်မာမွတ်စလင်မ် မီဒီယာ သို့ပြောသည်။
ထို့အပြင် အထက်ပါ ဒေသခံ ၉၆၉ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းဝင်များသည် မိတ္ထိလာတွင် ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများက အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအား မြို့လုံးကျွတ် ဖျက်ဆီး သတ်ဖြတ် နေချိန်တွင်လည်း ထားမလုံ ကားဂိတ်တွင်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူငယ် ၃ ဦးကိုလည်း ခြိမ်းခြောက် ပါးရိုက်မှုကိုကျုးလွန်ခဲ့ဖူးသူများ ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
မတ်လ(၂၀)ရက်နေ့က မိတ္ထီလာမှာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဒီမှာလည်း အဲဒီ(၉၆၉)တံဆိပ်တွေကပ်ပြီး ပွကြီးတို့အုပ်စုက ဒီကလေး(၃) ယောက်ကို ၀ိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်တယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတယ်ဗျာ။ မင်းတို့ကို နောက်ချောင်းရိုက် မယ်လို့လည်း ကျိန်းထားသေးတယ်ဗျာ။အခုညပိုင်း ထားမလုံကားဂိတ်မှာ ကယ်ရီမဆွဲရဲ့တော့ဘူး။ အဲဒီပွကြီးတို့က အုပ်စုလိုက်ထားမလုံကားဂိတ်မှာ ကယ်ရီဆွဲ နေကြတာဗျာ၊ အမြန်ဆုံး ကလေးတွေ့ရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ မီဒီယာများကနေတစ်ဆင့်ပြောပေးကြပါ" ဟု ဦးအေးဝင်းကပင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်မီဒီယာ သို့ ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်၉၆၉ ဂိုဏ်း သားများက နှောက်ယှက်မှုခံခဲ့ရသည့်ဦးအေးဝင်းသည် သန်လျင်မြို့နယ်လက်ယက်စမ်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်ကာ ကလေး (၆၀)ကျော်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အခြေခံစာသင်ကြားပေးလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့လာရောက်ကျူးကျော်ဆူပူသောင်းကျန်းမှုကို တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်အရေးယူပေး ခြင်းမရှိသဖြင့်အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အခြေခံစာသင်ကြားခြင်းကို ရပ်နားထားရကြောင်း သိရသည်။
Sam Gordon just wanted to run with the older kids. The coaches in the local tackle football league figured, hey, why not? Maybe they could turn it intoadrill: Who can outrun Max's little sister? They were shocked to find the answer: no one.
Sam ended up running for 25 touchdowns and 10 conversions in her first season playing tackle football. She earned the nickname "Sweet Feet" andabreathtaking viral video in which she looks so fast that you have to wonder if it's real.
"I started her out in soccer at4years old and we would play out in the yard," Brent explains. "And my son's friends were pretty aggressive and rough. She could really handlealot of the physical play. There were some games where she'd fall down and just keep going."
A lot of people won't accepta9-year-old girl playing tackle football, and perhaps with good reason. But it seems Sam loves it. Her dad and coach say she has no hesitation about coming back for another season. And her dad admits he's overwhelmed with pride.
What started as little Sam trying to keep up with her brother is now dozens of older boys trying to keep up with her.
~ Condensed from an article in Yahoo Sports! here. ~
Video of Sam Gordon competing is here. (Mute button lower left.)
Posted: 07 Apr 2013 04:30 AM PDT
မတ်လ ၂၇ ၂၀၁၃ မင်းသိက္ခာ(ပြည်မြန်မာ)
မြန်မာပြည်သူပြည်သား အထူးသဖြင့် ဗမာလူမျိုးရဲ့ ဓလေ့စရိုက်မှာ အားနာတတ်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးမှာမှ မရှိကြပါဘူး။ တကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလေ့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ဖက် ကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင် အားနာတတ်ရုံမျှမက ပွင့်လင်းစွာ စကားပြောဆိုတတ်ပြီး အင်မတန်ကိုရိုးသားကြတဲ့ တောသူတောင်သားတွေများပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ရိုးကြ အ ကြလဲဆိုရင် ဒီနေ့ခေတ်လို အချိန်ရောက်တဲ့အထိ လေမုန်တိုင်းတိုက်တာတောင် အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး ဓါးမနဲ့ခုတ်နေတဲ့ လူမျိုးတွေ အခုထက်ထိရှိနေတုန်းပါ။ ဒီလိုအားနာတတ်ပြီး ရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတွေကို ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ အုပ်စုတစ်စုနဲ့ ခရိုနီအချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ လိုဘတွေအတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး အရောင်ဆိုးခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးမှာ အုပ်စိုးခြယ်လှယ်နေခဲ့တဲ့ ခရိုနီတွေနဲ့ အာဏာရူးတချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ဘာမဆို လုပ်ဆောင်နေတာကို ဝမ်းနည်းစွာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေခြင်းဆိုတာကို မသိဘဲ ရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လှည့်ကွက်ထဲမျောပါသွားပါတော့တယ်။
သူတို့တွေဟာ ဘယ်လောက်ထိရက်စက် ယုတ်မာကောက်ကျစ်လဲဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လိုဘတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာမယ့် အချိန်တိုင်းမှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ကြံဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိ 969 ဆိုတာဟာ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ 969 လှိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း၊ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ၊ မလက်တို လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းရေး အရေးတော်ပုံတွေဟာ အလိုလိုမှေးမှိန် သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အနေအထားတွေတွေ့နေရပါတယ်။ တချို့က နောက်ပြန်လှည့်မယ်တို့ အာဏာပြန်သိမ်းမယ်လို့ မှတ်ချက်တွေပြုကြတာ ကြားသိရပါတယ်။ ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုပါ။ သို့ပေမဲ့ သေချာတာကတော့ အားလုံးနီးပါး သူတို့တွေရဲ့ လှည့်ကွက်တွေထဲမှာ နစ်မျောနေကြပြီဆိုတာပါပဲ။
လက်ရှိအစိုးရဟာ တစ်ချိန်က စီးပွားရေးအင်အားကြီးတဲ့ အာဏာရှိခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့ ခရိုနီတစ်စုကို လှန်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ ခရိုနီတွေပါတာ ဘယ်လောက်ထိ သိသာလဲဆိုရင် ဒီရက်ပိုင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကြို့ပင်ကောက်မြို့ရှိ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ ဗလီ၊ စာသင်ကျောင်းနဲ့ အိုးအိမ်တွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့နေရာမှာ ဘူဒိုဇာပါ အသုံးပြုလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သာမန်လုပ်ငန်းရှင် ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ ဒီလို ဘူဒိုဇာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေဟာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေ အကြီးကြီးတွေလုပ်တဲ့ ခရိုနီတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ အဖျက်ဆီးခံရတဲ့ မြို့တွေမှာရှိတဲ့ မြို့ခံသိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်တွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ မီးမရှို့ဖို့နဲ့ လူမသတ်ဖို့လောက်ပဲ တားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို မတားဆီးနိုင်တာကိုကြည့်ရင် နောက်ကွယ်က အမိန့်ပေးခိုင်းစေနေတဲ့ အင်အားစုဟာ အစိုးရကိုပါ အာဏာသက်ရောက်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အကြမ်းဖက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က အုပ်စုတွေဟာ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စမှာ အကြမ်းဖက်မှုမပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ မီးလောင်ဗုံးပစ်သွင်းခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ အခုမိတ္ထီလာကိစ္စမှာ ဘာမှထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမှုမရှိဘဲ တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့အကြမ်းဖက်ခံနေတာကိုကြည့်ရင် သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သက်သက် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဘာသာရေးပဋိပက္ခလို့ဆိုရလောက်အောင်လည်း ဘယ်မြို့ခံအချင်းချင်းမှ ဒုက္ခမပေးကြသလို ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို ကယ်ယူစောင့်ရှောက်နေတာကိုလည်း ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန်မွန်မြတ်ပြီး သဒ္ဓါတရားပြည့်ဝတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့လည်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်တွေရဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ
(၁) မြစ်ဆုံကို မေ့လျော့သွားစေပါတယ်။
(၂) လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စရဲ့ တင်းအားတွေ လျော့ပါးသွားစေပါတယ်။
(၄) မလက်တိုအရေးအခင်းပါ ကွယ်ပျောက်သလိုဖြစ်နေပြီ ဆိုတာကို သတိပေးပါရစေဗျာ။
အထက်ကသုံးသပ်ပြခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကို သေချာလေ့လာပြီး စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ လှည့်ကွက်ထဲမှာ နစ်မျောပြီး ပြည်သူက ၉၆၉ ထိုင်လုပ်နေ၊ အစိုးရက အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင် ခွင့်ပြုနေဆိုရင်တော့ မကြာခင် ချောက်ကမ်းပါးထဲ လက်တစ်လုံးအလိုကို ကျတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်တင်မယ့်သူတွေ အသင့်စောင့်နေပြီလို့ ကိုမင်းကိုနိုင်(၈၈) ရဲ့စကားလေးနဲ့ သတိပေးလိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျာ။
ဆောင်းပါးရှင်၏ အမြင်နှင့် အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။
Posted: 07 Apr 2013 04:27 AM PDT
ရေးသူ – မန္တလေးဘုန်းကြီး
သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး တူညီသော အယူအဆ ဆန္ဒကိုဖော်ပြရမည်ဆိုလျှင် -
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် အလွန်ယုံကြည် အားကိုသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်း ကလည်း ဆရာကြီးအပေါ် အလွန်ယုံကြည်အားကိုးသည်။ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်သည် အထက (၂) ရှေးယခင် နေ ရှင်နယ်အမျိုးသားကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးလမ်းစ ပျိုးခင်းထောင်ခဲ့ပုံမှာ နေရှင်နယ်ကျောင်းကြီး၌ "ရဲညွန့်တပ်ဖွဲ့" ဖွဲ့စည်းလျှက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို လျှို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းတည်ခင်းကြသည် နောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ရဲညွန့်တပ်ဖွဲ့ ရုပ်သိမ်းစေ၍ တားမြစ်သည်ကို လက်ခံလိုက်ရသည်။
တစ်ယောက်က မွတ်စလင် အစ္စလာမ်၊ တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သော်လည်း မင်းက ဘယ်ဘာသာ ငါက ဘယ်ဘာသာဟူ၍ ဘာသာနှင့်စပ်၍ မပြောခဲ့စဖူးဟု သိရ၏။ မြန်မာပြည်သားပီပီ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရရေးကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့ကြသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်၍ ထိုခေါင်းဆောင်ကြီး နှစ်ဦးအပါအဝင် အာဇာနည်မြောက်များ စွာတို့ အသက်ပေး ချွေး သွေးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး ပန်းတိုင်အောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြသည်မဟုတ်ပါလော။ ထိုသို့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်စဉ် "သခွပ်ပင်က မီးတကျည်ကျည် မဖြစ်ကြပါနဲ့၊ မလုပ်ကြပါနဲ့" ဟူ၍ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေဖြင့် တောင်းပန်စကားပြောကြားရင်း လွတ်လပ်ရေးမဆုံးရှုံးစေရေး ကို သတိပေးလိုက်ရပါသည်။
မတ်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၃ M-Media www.bangkokpost.com ပါ ဆောင်းပါးအား ဆီလျော်သလို မြန်မာပြန်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့်လက်တွဲကာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၊နိုင်ငံ့ကျောထောက်နောက်ခံ နှင့် ငွေကြေးအခန်းကဏ္ဍများ၌ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖွံဖြိုးအောင် ခိုင်မာ တည်ငြိမ်အောင် စိတ်ထက်သန်စွာကြိုးပမ်းနေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မတ်လ ၂၀-၂၁ ရက်တွင် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲသည် နောက်ကြောင်းပြန် မလှည့်မည့်၊ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်မည့် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု အခန်းကဏ္ဍ အတွက် အချိန်ဆိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအရ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖယ်ကြဉ်ခံထားရသည့် တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလားအလာများ သစ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် စိတ်ဝင်တစား ရောက်ရှိလာကြသည်။
သို့သော် မန္တလေးနှင့် မဝေးကွာလှသော မိတ္ထီလာမြို့နယ်၌ မွတ်စ်လင်မ်ဒေသခံများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအကြမ်းဖက်ကြီးမှုအား လက်ပိုက်ကြည့်လွှတ်ထားခဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက်ဖျက်ဆီးနေခြင်းကြောင့် အထက်ပါအချက်နှင့် လုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်သည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်ရသည်။
ယင်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပသည့်နေ့မှာပင် မိတ္ထီလာမှာ တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသည်နှင့် စစ်မက်ဒဏ်ခံရပ်ဝန်းအလား ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့သည်။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်ဈေးဆိုင်များ အပါအ၀င် အဆောက်အဦများစွာ ပြာပုံဘ၀ရောက်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရှိ မီဒီယာများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ သတင်းအရ သတ်ဖြတ်ခံရသည့်လူဦးရေမှာ ရာဂဏာန်းအထိ ရှိကြောင်း ဆိုနေသည်။
လူတို့ကို ကျောက်ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ ရှိခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ က ပြောဆိုလာပြီဖြစ်သည်။ အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် မိဘမဲ့ကလေးငယ်များပါဝင်သော အစ္စလာမ်ပညာသင် ကျောင်းသား ၂၈ ဦး၊ ဆရာ ၄ ဦးတို့အား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အကြမ်းဖက် လူအုပ်ကြီးတစ်စုမှ မသေမချင်းရိုက်သတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပြန့်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
ယင်းရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက် နေပြည်တော်၊ ပဲခူး၊ ရမည်းသင်း၊ ရန်ကုန် အစရှိသော နိုင်ငံဒေသအများအပြား၌ စိုးရိမ်သောကများ၊ အကြမ်းဖက်မှု များ ကျယ်ပြန့်သွားသည်။ နာမည်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးနှင့် ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်များမှ မိနစ်ပိုင်းမျှခရီးတာရှိ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှ မွတ်စ်လင်မ်ဈေးဆိုင်များ၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များကို တနင်္ဂနွေနေ့ညဉ့်ပိုင်းတွင် ရန်ပြုတိုက်ခိုက်လုမတတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ထရပ်ကားသုံးစီးဖြင့် လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ စေလွှတ်ခဲ့ရသည်။
လတ်တစ်လောအကြမ်းဖက်မှုများသည် အပြန်အလှန်ပဋိပက္ခအသွင်မဆောင်၊ ၄င်းပြင် လူနည်းစုတို့အား စံနစ်တကျအကွက်ချတိုက်ခိုက်မှုများ၏ လက္ခဏာမှာ အထူးပေါ်လွင်နေသည်။ မိတ္ထီလာ၌ တိုက်ခိုက်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်မားစဉ်က တုန်လှုပ်နေကြသော ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား မိမိတို့၏နေအိမ်များအတွင်း ခိုကိုးရာပေးကာကွယ်၍တစ်မျိုး မြို့နှင့်ဝေးရာသို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်တစ်ဖုံ အသက်စွန့်ကယ်တင်ခြင်းများလည်း ဧကန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မိတ္ထီလာတိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်ပွားအောင်လှုံ့ဆော်ချက်ဟု လူသိများကြသော လက်ရှိ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုအပါအ၀င် လပေါင်းများစွာကတည်းက မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေး အတွက် သွေးထိုးပေးနေသည့်အုပ်စုများအား သတိထားကြရန် ပြည်တွင်း မွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့အစည်းများမှ သတိပေးလျက်ရှိသည်။ မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရပ်များမှာ လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်လောက်မှစ၍ တရိပ်ရိပ်တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းတစ်ခုအား အကြမ်းဖက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၃၀၀ ရှိလူအုပ်မှ ဖြိုချဖျက်ဆီးသည့်ကိစ္စမှာလည်း အပါအ၀င်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဝီရသူ၏ဟောကြားချက်တစ်ခုတွင် " (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်)လူထုအား ကျွန်ုပ်တို့မှ စုစည်းလှုပ်ရှားခြင်း မရှိပါမူ နိုင်ငံသည် (မွတ်စ်လင်မ်)ရန်သူတို့၏လက်ထဲသို့ ကျရောက်တော့မည်၊ ဤတိုက်စစ်အောင်မြင်သည်နှင့် အခြားမွတ်စ်လင်မ် ပစ်မှတ်များထံ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက် ဦးတည်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ်မှတ်များအပေါ် ဆက်လက် စစ်ဆင်သွားမည် " ဟူသော အဓိပ္ပာယ်မျိုး ပါဝင်နေခဲ့သည်။ ယင်းဟောပြောချက် မှတ်တမ်းသည် ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့က အွန်လိုင်းမျက်နှာစာပေါ်သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုအုပ်စုသည် မွတ်စ်လင်မ်တို့ကို ထိုးစစ်ဆင်ရန် လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ စီဒီနှင့်ဗီစီဒီအခွေများ ဖြန့်ဝေခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှန်း တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေး နမ်ဗီယာသည် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မိတ္ထီလာမြို့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စ၏တာဝန်ရှိသူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရကိုလည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဤအကြမ်းဖက်မှုကြီးဖြစ်အောင် တွန်းပို့ခဲ့သူအချို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားပြု သံဃာတော်များအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂအရာရှိ များနှင့်တွေ့ဆုံစေခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်သူအချို့အား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသော်လည်း အကြမ်းဖက်မှုနောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်နေ သူများကိုမူ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားဆဲဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရဖက်မှ ထိခိုက်ခံဒေသများသို့ လုံခြုံရေးတပ်များစေလွှတ်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ယိမ်းယိုင်စေမည့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများ ကို ရှောင်ကြဉ်ကြရန် နိုင်ငံသားတို့အား တိုက်တွန်းမှာကြားကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားမှ တနင်္လာနေ့တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားတို့အား ကာကွယ်ရန်၊ ပြည်သူတို့မှ လုံခြုံရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိရန်ကား မိန့်ခွန်းပြောကြားယုံမျှဖြင့် အကျိုးမသက်ရောက်ပါ။ အာဃာတနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား နိုင်ငံတစ်ဝှန်းသို့သွတ်သွင်းနေသော ဦးဝီရသူ အပါအ၀င် အကြမ်းဖက်မှုနောက်ကွယ်တရားခံများ ကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ချက်ခြင်းလက်ငင်းဖမ်းဆီးအရေးယူရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပေသည်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် လူမျိုးရေး ဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု၊ ပျက်လိုဖျက်ဆီးရပ်တည်ချက်များသည် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်နေသော တိုင်းနိုင်ငံ တစ်ခု၌ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါ။ ထိုသို့ ပြုကျင့်ခံရပြီး လူပေါင်း တစ်သိန်းနှစ်သောင်းအား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားစေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဂယက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပွားပြီး တစ်နှစ်မပြည့် တတ်သေးမှီမှာပင် မိတ္ထီလာဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီး ဖြစ်လာပြန်သည်။
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် အောင်မြင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ အာဏာပိုင်အစိုးရမှသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း အုပ်စုများ၊ ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ၊ ခေါင်းဆောင်များအထိ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံး၏ အလွှာအသီးသီးမှ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်နေပါသည်။
ပြည်ထောင်စုပုံစံ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်တည်ဆောက်ရေး၌ လူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမျိုးကြီးဝါဒအား လက်မခံရေးနှင့်အမြစ်လှန်ရေး၌ လည်းကောင်း၊ အစစ်အမှန် ရင်ကြားစေ့သင့်မြတ်ရေး အား ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၌လည်းကောင်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားရန် လိုအပ်ပေသည်။
ဤသည်တို့ကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာကောင်းတို့ကို တဖြည်းဖြည်း မြေမြှုပ်ဖြိုလဲမည့် ဖိအားများ၊ အရှိန်အဟုန်များ အား တည်ဆောက်ပေးရာရောက်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ပုံရိပ်များ မှေးမှိန်သွားစေပါသည်။
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာအာဏာပိုင်များသည် အာဆီယံစာချုပ်ပါအချက်အလက်အပေါင်းကို လက် ကိုင်ပြုဖော်ဆောင်သော အစိုးရ တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြသရပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းလူ့ဘောင်ကလည်း လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သွေးသား မခွဲခြားသော ပြန်လည်သင့်မြတ်ပေါင်းစည်းရေး အစီအမံများ ထိထိရောက်ရောက် ပြုလုပ်ရန် မြန်မာအစိုးရအား တိုက်တွန်းခြင်း၊ ၀ိုင်းဝန်းကူညီခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်မှုခရီးကြမ်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်ဆောက်ရွက်သင့်ပေသည်။
သို့မဟုတ်ပါက ရန်ကုန်မြို့၌လတ်တစ်လောပြုလုပ်သွားခဲ့သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုကြီးသည်ကား " ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆီ သို့အသွင် ကူးပြောင်းသည့်နိုင်ငံ " ဟူသော အိပ်မက်များ အစိပ်စိပ် အမြွာမြွာဖြစ်သွားခြင်းနှင့်အတူ ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက်ဒဿနရှင်များ၏တွေ့ဆုံမှု တစ်ရပ်မျှသာဟု ဆိုရပေတော့မည်။
မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၃ M-Media ဇာဏီ
အကြမ်းဖက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားရာ ရွှေဆိုင်များဖျက်ဆီးခံထားရသည့်ပုံ
မိတ္ထီလာ ။ ။ မိတ္ထီလာမြို့တွင် အကြမ်းဖက်ခံရသော မွတ်စလင်မ်များ၏ ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကို ယခုတက်တိုင် လုယက် ယူဆောင်နေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အတွင်းက မိတ္တီလာမြို့တွင် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရသည့် မွတ်စလင်မ်များမှာ ယခုအခါ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်နေရသည်။ တချို့မှာ မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်မှ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ရှိပြီး တချို့မှာ မိတ္ထီလာအနီးတ၀ိုက်မှ ရွာများတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြသည်။မိတ္ထီလာတွင် အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်နေသော ယခုအချိန်တွင် မိမိတို့ အိုးအိမ်များ၏ အခြေအနေများကို သိရှိရန် ပြန်သွားချင်ကြသော်လည်း ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်မရသေးကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် မိမိအိမ်၏အခြေအနေအား သိရရန် ခဏပြန်လည်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ဒုက္ခသည်တစ်ဦးမှ သူမြင်တွေ့ခဲ့ရသည် လတ်တလော အခြေအနေကို ပြောပြလာပါတယ်။
"ကျွန်တော်က ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရောက်နေတာပါ။ ဒီမနက် ၉-နာရီလောက်မှာ မိတ္ထီလာက ကျွန်တော့်အိမ်ကို ကျွန်တော် ခဏ သွားပြန်ကြည့်တယ်။ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်ထဲမှာပါ ကျွန်တော့်အိမ်က။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တွေ့ရတာက အိမ်က ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေက မွှေနှောက်ရှာဖွေယူနေတယ်ဗျာ။ တစ်ခြား အိမ်တွေက ပစ္စည်းတွေလည်း အဲလိုပဲယူနေကြတာ။ လူတွေကတော့ မျက်နှာစိမ်းတွေပါပဲ။ အနီးအနားရွာတွေက ပဲဖြစ်မယ်။ တချို့ကလည်း မီးလောင်ပြီး မီးကျွမ်းနေတာတွေ၊ တချို့ကလည်း ဒီအတိုင်း မီးမလောင်ပဲ ကျန်နေတာတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ကားပစ္စည်းတွေဆိုရင် ဥပမာ – ကားကရောင်းတွေဆို မီးလောင်ထားရင်လည်း ပြန်သုံးလို့ရတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကအစ သယ်နေကြတာ။ စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ သယ်နေကြတာ။ ဟုတ်ကဲ့ လုံခြုံရေးတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့က ပေတရာ(လမ်းမ)ပေါ်မှာ ရှိနေတာ။ အခုသယ်နေတာတွေက သူတို့တွေနဲ့မဝေးဘူး။ ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ သယ်နေတဲ့သူတွေကို လုံခြုံရေးက ဘာမှ မပြောဘူး။ ကျွန်တော်လည်း မပြောရဲပါဘူးခင်ဗျ။ အခု အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေက ကြားညှပ်နေပါတယ်။ ကျီးလန့်စာစား ဘ၀မျိုးကို ရောက်နေတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်က ပစ္စည်းတွေ သယ်ယူနေကြတာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ဘာမှလည်း မပြောရဲတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်လာလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေမှတဆင့် သိအောင် ပြောပြတာပါ"လို့ M-Media ကို ဆက်သွယ်ပြောပြလာပါတယ်။
Posted: 07 Apr 2013 04:05 AM PDT
မတ်လ ၂၈ ၊ ၂၀၁၃ M-Media
မြန်မာနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်များအား အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် Asian Muslim Action Network မှကြေငြာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရှိပါသည်။ ၄င်းကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိတာကတော့
ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ AMAN မှ စိုးရိမ်ပူပန်မိပြီး၊ အလွန်ပင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။
အထူးသဖြင့် မိတ္ထီလာမြို့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ၀တ်ပြုရာနေရာများ၊ နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ လူများ သေကြေပျက်စီးခြင်းများကို ကြားသိရပြီး ထိုလုပ်ရပ်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့မှ လုံးလုံးလျားလျား ရှုတ်ချပါသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုများအတွင်း မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအားလုံးအတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းနည်းမိကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုဒဏ် ခံစားခဲ့ရသော သူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ရှိနေပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေနှင့် ထိုအကြမ်းဖက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကြမ်းကြုတ်သော အကြမ်းဖက်မှုကို ကြံစည်ဆောင်ရွက်သူများ၊ အထူးသဖြင့် လူနည်းစု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့်ပက်သက်၍ အမုန်းတရားများကို ဖြန့်ဝေမှုတွင် ပါဝင်သူများအား အရေးယူပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အလေးအနက် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါသည်။
မကြားသေးမီကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် အဓိကရုဏ်းများ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွင် အဆိုးဝါးဆုံး မှတ်တမ်းရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာများမှာလည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အခံရဆုံး လူ့အဖွဲ့စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုများက တိုင်းပြည်၏ ရည်ရှည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖန်းတီးမှုများဆီသို့ ရှေ့ရှုရာတွင် – မတူညီသော တိုင်းရင်းသား လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြား မကျေလည်မှုများကို ကုစားခြင်း စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၃၀ ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၃၀ ဦးနီးပါး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရပါသည်။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ၁၅ လုံး၊ အစ္စလာမ့် ဓမ္မသင်တန်းကျောင်း ၅ ခု၊ အခြားအဆောက်အဦးများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်းများစွာကို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
မိထ္တီလာမြို့တွင် အခြေအနေများအား ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အနီးအနားတစ်ဝိုက်ရှိ မြို့များ၊ ရွာများသို့ အကြမ်းဖက်မှုများ ပျံ့နှံ့သွားသည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိရပါသည်။
အခုလက်ရှိ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများအား ရပ်တန့်စေရုံသာမက၊ '၉၆၉ ဂိုဏ်း' ဟုခေါ်သည့် အဖွဲ့မှ အမုန်းတရားဖြန့်ဝေနေမှုများကို ရပ်တန့်စေခြင်းဖြင့် လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် လူနည်းစု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် တင်းမာမှုများကို တားဆီးပေးရန် မြန်မာအစိုးရအား ကျွန်ုပ်တို့မှ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားသော ပြည်သူတို့အား ပြည့်ဝသော လုံခြုံရေး အထောက်အပံ့များနှင့်အတူ ပြန်လည်နေချထားပေးရန် ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများကို ချက်ခြင်း တားဆီးပေးရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးရန် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး နှင့် OIC ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့မှ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်ခံရသောသူများအား ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲ လျော်ကြေးပေးရန်၊ နေအိမ်များ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန် နှင့် အသက်မွေးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ထူထောင်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ မြန်မာအစိုးရအား တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် ထိုကဲ့သို့သော အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်တားဆီးရန်အလို့ငှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမှ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအား ကျွန်ုပ်တို့မှ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၃ M-Media အမ်တူးအေ
ရန်ကုန် ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ယနေ့ ၆.၄.၂၀၁၃ (စနေနေ့)တွင် ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမ၌ နေ့လည် (၂)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်း အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ ဘားအံတို့မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်မှ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ချို(တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)၊ ပါမောက္ခဦးရဲလွင်နှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာများနှင့် မန္တလေးမှ ခလီဖွှာဟ်ဦးသိန်းဝင်းအောင်(KAFTG)၊ ဦးအောင်ဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့် ၊ ရှမ်းပြည်နယ် မှ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်နှင်းရီအေး တို့အပါအဝင် အခြားဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ အခြားအဖွဲ့သီးသီးနှင့် ကွန်ရက် ၂၄-ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၂၀၀-၀န်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ုထိုကဲ့သို့ အဖွဲ့ပေါင်းစုံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကိုလှမြင့်နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်စုမှ Organize လုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ – လတ်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော common issue တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အဖွဲ့များ အချင်းချင်းကြားမှာ ကွာဟနေတဲ့ ကွာဟချက်တွေကို နီးနိုင်သမျှ နီးစပ်နိုင်ရန်၊ အဖွဲ့များအကြား ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု ရရှိရန်၊ Myanmar Muslim Conference ဖြစ်မြောက်ရန်၊ မတူကွဲပြားတဲ့ ဘာသာတရားတွေကြားမှာ အချင်းချင်း နားလည်မှု တည်ဆောက်ရန် တို့ဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲအား အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၉)ရပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သဘာပတိအဖြစ် ဦးခင်မောင်ချို(တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)မှ ဆောင်ရွက်ပြီး တက်ရောက်လာသော ကွန်ရက်များမှ အသီးသီးမိတ်ဆက်ကြပြီး၊ တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်များထဲမှ (၄)ဦးမှ အမှတ်တရစကာများ ပြောကြားကြပါသည်။ ပြီးနောက် တက်ရောက်လာသော ကွန်ရက်များ အားလုံးကိုယ်စား အခန်းကဏ္ဍ(၅)ခုအား ဆွေးနွေးတင်ပြရာ Identity, Rule of Law, Constitution, Hate speech, Myanmar Muslim Conference စသည့် ခေါင်းစဉ် (၅)ရပ်ဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သော Myanmar Muslim Conference ဖြစ်မြောက်ရေးကိစ္စအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း(ငြိမ်းချမ်းလုလင်)မှ နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားပြီးနောက် ဆွေးနွေးပွဲကို ဒုအာ(ဆုမွန်)ဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဲဒီနောက် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ အကြမ်းဖက်မှုများတွင် အပြစ်မဲ့စွာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအား လေးစားသောအားဖြင့် တစ်မိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်၍ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို အောင်မြင်စွာရပ်နားလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
စီစဉ်သူများထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် ကိုရဲရင့်သစ္စာအား ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း မေးမြန်းရာ "အဖွဲ့ကျင်းပရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ရှိနေတဲ့ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နောက် လူငယ်တွေရော၊ လူကြီးတွေရော၊ အားလုံးစုပေါင်းပြီး ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ထိတွေ့မယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ Hate speech တွေ၊ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ လူမျိုးပေါင်းများစွာလည်းရှိတယ်။ ဘာသာတွေလည်း ကွဲကြတယ်။ ဘာသာကွဲတိုင်း လူမျိုးကွဲတိုင်း ရန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိဘာသာတရားက သင်ပေးထားတာက ဘာသာကွဲတယ်၊ လူမျိုးကွဲတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသိအမှတ်ပြုဖို့ဖြစ်ပြီး ရန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ initiate လုပ်တဲ့သဘောပဲ။ အဓိကကတော့ ဒါပါပဲ။ ဒီပွဲကနေ လတ်တလော ကျွန်တော်တို့ ခံစားရတဲ့အကျိုးအမြတ်က ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပြီးတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဖွဲ့တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိလိုက်ရတယ်။ ဒီပွဲလေးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးပါပဲ။ ဒီပွဲကို Organize လုပ်တဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်အနေနဲ့ တော်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီပွဲကနေစပြီး ကျွန်တော်တို့က ဘာသာပေါင်းစုံက အဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကလည်း ဒီလိုပဲ လမ်းညွှန်ထားတယ်။ မတူညီတာတွေ စုပေါင်းပြီး မုန်းတီးမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တားဆီးဖို့၊ ပပျောက်အောင်လုပ်ဖို့။ အများကြီး အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံး ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ အခုလောလောဆယ် တစ်ခုချင်း အသေးစိတ်တော့ မပြောပြနိုင်သေးပါဘူး။ အများကြီးတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် volunteer တွေစုပြီးတော့ တွေ့ဆုံပွဲလေးတွေ ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် organize လုပ်ပေးမယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဆန္ဒရှိပါတယ်။ တစ်ခြားတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီတာတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး တူညီတာတွေကိုပဲ ဘုံ (common interest)အဖြစ် ယူပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ 'ညီညွတ်ခြင်းမှသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ (Unity for peace) ဒီဆောင်ပုဒ်လေးကိုပဲ ခေါင်းထဲထားပြီးတော့ လုပ်သွားကြဖို့ပါပဲ'ဟု ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ခေါင်းစဉ်များအား ထပ်မံဖော်ပြပါမည်။